Iyo Big Data inogona sei kubatsira kuchengetedza mabhizinesi network akachengeteka - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, Enterprise, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Muindasitiri, data rakagara rakatora yakawanda nzvimbo. Asi nezvishoma zviwanikwa, pakanga pasina zvakawanda zvakaitwa munzvimbo yekuchengetedza. Izvi zvaive zvaisa maindasitiri mazhinji panjodzi yekuba uye akatarisana nekurasikirwa kukuru. Kunyangwe chengetedzo uye chengetedzo zvaifungidzirwa sedunhu mbiri dzakasiyana. Vangave vakashanda pamwechete kuti zvikomborero zvemakambani asi ivo vane misiyano yavo futi. Zvakanaka, izvi zvaive kusvika Big Data yakaunzwa. Yakatenga shanduko mukubatana uye kuitwa kwemabhizinesi anoenderana nedata.
Iyo hombe vhoriyamu yedata mapurojekiti akati wandei ayo anobatsira maumbirwo enetiweki. Zvinoda gore-based midziyo uye chaiyo kuchengetedza kuti upedze makuru data mapurojekiti Mumashoko akapusa, iyo hombe dhata network yakanyanya kukosha kune zvinangwa zvekutarisa. Nekudaro, kuve nechokwadi chekuti chengetedzo yemabhizinesi haina kukanganiswa nekuda kwechinhu chero chipi zvacho, makambani anotora zviyero zvakasiyana. Sechinhu chechinhu, pamwe nekufambira mberi kweBig Data uye matekinoroji, chengetedzo yakabuda mairi sebhizinesi idzva rese. Makambani ari kuuya nematunhu mazhinji akaomesesa ekuchengetedza data ayo anogona kuvabatsira zvakanyanya.
Zvino mubvunzo mukuru unomuka ndewokuti - ingave hombe data muponesi wekuchengetedzwa kwedata kana kuti kutyisidzira? Kana zvisiri, saka chii chaizvo chiri kutyisidzira kuBig Data?
Funga nezve Big Data sedziva rakazadzwa nemvura (dhata sosi). Kune nzvimbo dzakawanda kwazvo dzinogona kuwana mvura, kuburitsa kana kubiwa. Saizvozvowo, Big Data idambudziko nekuti mudziva rizere nedhata, zviri nyore kuwana uye kurishandisa sekuda kwedu uye kuda kwedu. Ehe, vanhu vazhinji vanotenda kuti dhata dhata dzinowanikwa nerubatsiro rwegore kana network kubatana. Asi sezvazviri chokwadi, Big Data inogona kuunza edu akasiyana mapoinzi anogona kusiya kambani kana module iri panjodzi. Kunyangwe kana chibvumirano kana gwaro riri pasi petsika dzekutyora ipapo Big Data inogona kuisa yakabata pazviri.
Kunze kweizvi, Big Data iri pano kubatsira bhizinesi munzira dzakawanda kwazvo dzakafanotaura. Hapana mubvunzo kuti for Data management, chengetedzo ndiyo mapoinzi akakosha anouya pamusoro pezvose. Izvi zvinogona kuratidzwa zviri nyore nemisimboti mikuru yeData chengetedzo iyo inoteedzerwa kumusoro kuburikidza neBig Data chikuva nemabhizinesi.
Izvi zvese zvine chekuita nekusimbiswa kwemushandisi. Kana mushandisi akasaina sevhisi kana chigadzirwa, kuzivikanwa kwemushandisi kunodiwa izvo zvinogona kutora nguva izvo zvinoita kuti mushandisi asarudze imwe nzira. Nekudaro, nerubatsiro rweBig Data, maitiro ekusimbisa ari nyore senge keke yekufamba. Iko kutove nevhoriyamu yedata iyo inogona kuongororwa zviri nyore uye kusimbiswa nemushandisi.
Makambani mazhinji arikutarisawo pamasaini-pane sarudzo kuti ave nechokwadi chekuti kuchengetedzeka kwepuratifomu yavo kuri kuchengetedzwa. Ivo vanoongorora uye vanoongorora iyo data kubva kumagumo-kusvika-kumagumo kuchengetedza kuchengetedzeka kwakasimba. Iyi sarudzo yekuongorora zvakare inosanganisira ekuongorora maturusi uye madhibhodhi. Kune mushandisi wekare, chishandiso chekrisptography chinoshandiswa zvakare kuve nechokwadi chekuti munhu mumwe chete ari kupinda muaccount. Ivo kazhinji vane yakasarudzika ID nePassword kana mune imwe kesi siginecha kiyi.
Rimwe danho rakatorwa nemakambani nerubatsiro rweBig Data ndeye mvumo yedata kune vebhizinesi chete. Ruzivo rwepamutemo uye zvakavanzika mafaera anongogoverwa huwandu huwandu hwepamusoro masimba vashandi kana mamaneja. Muzviitiko zvishoma, kunyange vashandi vanobatanidzwa asi ine yavo seti yematemu nemamiriro. Pamusoro peizvi, ivo vanodawo chimiro chine musoro kuzadzisa zvinangwa nerubatsiro rwemvumo.
Chinhu chete chinokanganisa ndechekuti kupatsanurwa kwemuviri hakugone kudzorwa kuburikidza nemhando ipi neipi yemvumo. Asi mvumo inokwanisa kubata mabasa anogona kuitwa nemushandisi kana kunyangwe zviwanikwa zvingashandiswa. Semuenzaniso, mushandisi anogona kubata nyore yavo yavo eCommerce account sezvo vaine mvumo yekuita kudaro nepo vasingakwanise kushandisa account yemunhu akagara pasi rese.
Maitiro aya anogona kubvarurwa nawo kuti unzwisise algorithm uye maburi ehurongwa hwakadaro zvinotora nguva yakawanda. Iye zvino unogona kunzwa kuti mubiridzi anogona kutora nguva yavo kutsvaga maburi. Zvakanaka, hazvisi izvo zvakapusa, nekuti zvinoshandurwa uye nekuvandudzwa mushure mechipfuva kusvika panguva yekuona kuti yakachengetedzwa zvakanyanya.
Encryption uye Dhata Masking
Iko kunetsekana kukuru kwebhizinesi mushure mekuyera kwakadai kuba kwemukati kwedata. Kuchengetedza vhoriyamu hombe yedata munzvimbo yebhizinesi inogona kuva rinotyisa uye rakaoma basa kune vebhizinesi vashandi. Nekudaro, kuti vakunde mamiriro akadaro, makambani izvozvi anoenderana nechimwe chinhu cheBig Data - Encryption. Mune izvi, mhando mbiri dzehunyanzvi dzinoshandiswa mukuzorora kunyorera uye data rekufambisa.
Aya matekiniki anobatwa kuburikidza neketani yakaoma iyo yakabvisa iyo matambudziko izvo zvinoteverwa kumusoro mune faira-yakavakirwa ruzivo. Kunyangwe kana iyo isiri-faira-yakavakirwa ruzivo, aya matekiniki anoshandiswa zvakanyanya sezvo ruzivo rwakakomba runogona kuvharwa nyore nyore pasina kukuvadza chero yakavanzika data.
Kana isu tichienda kune zvakanyanya kutevedzwa zviri pamutemo uye murau, chave chinhu chakakosha kuongorora. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Big Data manejimendi inogona kubatsira zvakanyanya sezvo ichigona nyore kugadzirisa masumbu ekumisikidza uye kuwana masumbu. Mumamiriro ezvinhu akadaro, yega yega yega chikuva chakaiswa mukati kuti mafaera agadziriswe uye achinjwe, kugadzirisazve sumbu, kugadziriswa kwedhatabhesi, kuyedza kupinda kuitira kuti ushandise imwe sevhisi uye tarisiro yechishandiso inogona kutorwa zviri nyore.
Pamusoro peizvi, iro vhoriyamu re data riri kuwedzera nekuda kwe kuongorora uye kufaira matanda. Izvi zvinoda kunyatso ongorora dhata kana chirongwa chekubvisa chero rudzi rwekudzikisira. Izvo zvinobatsirawo mukugadzirisa mutengo wekuchengetedza weprojekiti.
Njodzi Kudzorera uye Backup
Kana kambani iine basa rekugadzirisa huwandu hwakawanda hwe data, ipapo zvinokwanisika kutarisana nesisitimu kutadza panguva imwechete panguva. Nekudaro, nerubatsiro rweBig Data, iyi nyaya inobviswa padanho rakakura. Sisitimu inobatsira dhata zvakanyanya nekugadzira mabhakuki, mirroring mafaera uye kunyangwe kuteedzera iyo sisitimu kune imwe. Izvi zvinoshandiswa zvakanyanya asi chakanyanya kudzokorodza ndiko kushomeka kwedata.
Yakawedzera data haina basa kune system kana kunyangwe Enterprise iyo inova setup huru yebhizinesi renyika. Nekudaro, Big Data yauya nemhinduro kudambudziko iri futi. Iyo data haigone kudzokororwa nechero nzira mune chaiyo nguva. Mune ino system, data rakakamurwa muzvikamu - isiri-yakakosha uye yakaoma, yakaderera uye yakakwira nguva. Aya mapoka anobva achengetwa muhurongwa.
Big Data rave musana weasi kwete indasitiri yeIT chete asi bhizinesi rese repasirese. Ivo vari kushandisa epamberi analytics maturusi uye gore kadambari neBig Data kuita kuti inyatsoita basa uye kuvimbika. Mumakore anouya, hazvizoshamise kuona shanduko huru munzvimbo yedata uye nzira dzekuchengetedza data.